Amanani wokushintshaniswa kwemali yeDijidali abuyekeziwe 21/10/2021
Izezimali zedijithali ezikhula ngokushesha kunazo zonke ngo-2021. Izimali zedijithali ezinezinzuzo ezinkulu, izinzuzo zedijithali ezinenzuzo ngokukhula okuphezulu.
Izezimali ze-digital ezikhulayo eziphezulu kakhulu eziphezulu eziyishumi eziphezulu ngokukhula kwamanani ngesonto eledlule.
Izimali zeDivimenti ezinamandla kakhulu
Ukukhula kwamaphesenti ngesonto
Ren (REN) 352 033 %
Amun Bitcoin 3x Daily Long (BTC3L) 35 776 %
Fortuna (FOTA) 3 583 %
Mainstream For The Underground (MFTU) 1 186 %
Bitrise Token (BRISE) 1 061 %
ZUM TOKEN (ZUM) 696.28 %
Ainu Token (AINU) 680.19 %
MERCI (MERCI) 524.90 %
Payfair (PFR) 484.84 %
FairGame (FAIR) 434.86 %
I-idijithali yemali ekhula ngokushesha kakhulu yinsiza yewebhusayithi ye-ptptoratesxe.com, ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngokukhula kwesilinganiso esisheshayo ngesonto eledlule.
Insiza ye-inthanethi "ekhula ngokushesha kakhulu" i-inthanethi isebenzisa imithombo evulekile etholakala kusuka ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali futhi idala isilinganiso semali ekhula ngokushesha kakhulu ngesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali ekhula ngokushesha yi-crypto, ngokusho izincazelo zethu, okuthi phakathi nesonto kukhombise ukukhula okuphezulu kwenzuzo, ukukhula kwesilinganiso sayo. Ukushintshwa kwamanani entengo akuthathwa kungacabangi ngathi, kuphela ukuguqulwa kwenani esikhathini sokukhishwa kwesonto kubhekwa. I-idijithali yemali enjalo, njengomthetho, ibonisa inzuzo ephezulu kakhulu, kepha ayihlali iqinile. Ubungozi bokutshala imali ekhula ngokushesha bukhulu, kepha inzuzo ephezulu ngesikhathi ngasinye.
I-idijithali yemali ekhula ngokushesha ilungele ukutshalwa kwezimali okufushane nokungazinzi.
Ngokungafani "", ekhombisa ukukhula okuphezulu kwesonto ngeviki, Imali ye-digital ekhula ngokushesha insiza, ngokungafani nalokho, ibonisa i-crypto ngokukhula okuncane okuqinisekisiwe nokuqina okuncane.
Isilinganiso semali ekhula ngokushesha kakhulu yamakhompiyutha ihlala ilandiswa ku-inthanethi, njengoba ukushintshaniswa kwe-cryptocur lwemali kuhlale kuthengiswa, futhi isilinganiso se-idijithali yemali sishintsha njalo.
Sebenzisa insiza "ekhula ngokushesha kakhulu" nge-inthanethi futhi mahhala.
I-idijithali yemali enenzuzo kakhulu ye- 2021 insiza yethu ye-inthanethi yamahhala ekhombisa inzuzo kakhulu, ngombono wethu, ama-izimali zeDividenti ongathola imali ngawo ngokushesha.
Sihlola inzuzo yemali ye-cryptocurrensets ngokushintsha inani lemali noma isilinganiso salo sokushintshaniswa ekushintshaniseni. Sibheka imali enenzuzo kakhulu ye-crypto njengeyiyona ekhombise ushintsho oluhle oluphelele kwinani layo phakathi nesonto. Ngaphandle kokubheka ukuqina kwesilinganiso saso, sibheka kuphela umehluko wenani ekuqaleni kwenkathi yesikhathi nasekupheleni kwayo.
Isampula yomehluko emananini wamanani we-crypto onenzuzo ahamba ngaphezulu kwezinsuku eziyi-7 ezedlule. Intengo namandla we-idijithali yemali rate rate eshintsha nsuku zonke ihora ngalinye. Isilinganiso esiphakeme kakhulu se- "cryptocur lwemali" yethu esezingeni eliphakeme kakhulu siyashintsha futhi.
Ama-cryptocurrensets akhula ngokushesha kakhulu e- 2021.
Amanani akhula ngesivinini akhula kakhulu we 2021 - siyakhombisa kuleli khasi. Kepha ukukhula ngokushesha igama elisho ukushesha. Ukulinganisa inani lokushintshana kwe-crypto ye 2021 yisikhathi eside kakhulu. Sebenzela ama-izimali zeDividenti akhula ngokushesha kakhulu I- 2021 ikhombisa zezimali ngesilinganiso sokukhula kweviki.
Uhlu lwama-cryptocurrensets akhula ngokushesha e 2021 imelelwa isampula le-10ptptos ekuhleleni i-oda kusuka ekukhuleni okusheshayo kuya kokukhula ngokushesha, ekwehleni kwe-oda.
Ukukhula okusheshayo kubonakaliswa kakhulu ngumahluko okhona ekuqaleni kwesikhathi sokufunda nasekupheleni. Yikuphi ukwehla nokwenyuka kwezinga lokushintshashintsha kwesilinganiso sokushintshaniswa kwe-crypto kule ndlela akubalulekile.
Sibonisa ulwazi ngoshintsho kwisivuno sezimali ezikhula ngokushesha njengephesenti lesilinganiso sokukhula.
Izinga lama-cryptocurrensets akhula ngokushesha alethwa ngeviki lokugcina le- 2021. Asilandeleli ukuguquguquka kwalezi zimali kulenkonzo.
Sebenzisa insiza yama-cryptocurrensets akhula ngokushesha kakhulu e- 2021 ku-inthanethi futhi mahhala.
Ama-izimali zeDividenti anenzuzo kakhulu.
Ama-cryptocurrensets anenzuzo kakhulu angenye yezinto ezisheshayo ezisheshayo zesikhashana.
Inzuzo ephezulu ye-idijithali yemali ivumela abatshalizimali Ukunaka ukuthi bathole imali eningi ngesikhathi esincane.
Impela, ubungozi obumayelana nemholo ephezulu buphakeme.
Ukutshala imali enzuzweni enhle kakhulu kufanele kwenziwe ngokuzimisela kokuqapha njalo izinga futhi ungaphuthelwa iphuzu lokuphuma ekutshaleni imali.
Imithetho yokuhweba ngamaprosesa e-crypto, kanye nokushintshana okujwayelekile, iyaqondakala, futhi uma i-idijithali yemali ithola inani ngokushesha futhi ikhombisa imali enhle, khona-ke nayo ingalahlekelwa inani ngokushesha.
Yile ndlela esetshenziselwa ngayo imali esizibonakalisa ngayo kule ndawo yethu.
Ama-Izimali zeDividenti ngokukhula okuphezulu.
Ama-Izimali zeDividenti ngokukhula okuphezulu - kunqunywa ngesikhathi esithile. Enkonzweni yethu yokuhlanganisa isilinganiso samanani we-idijithali yemali ngokukhula okuphezulu, sikhethe isikhathi sokuqalwa kweviki elilodwa.
Ukukhula okuphezulu kwe-crypto ngeviki, njengoba sikubona, kukhombisa ukuthambekela kwesilinganiso sokushintshana kwe-idijithali yemali ngangokunokwenzeka. Okwamanje, konke ukushukuma okuncane kusuliwe futhi ukuguquguquka kwansuku zonke ngezinga lokushintshana nakho akunakwa.
Ukukhula okuphezulu kwe-crypto enkonzweni yethu yinkomba ephakathi kokutshalwa kwezimali isikhathi eside nemidlalo yokushintshana yabathengi nsuku zonke.
I-Crypto enesilinganiso sokukhula esiphezulu ingabukwa nakwezinye izinsiza zesiza sethu.
Ithebula le-izimali zeDividenti enenzuzo kakhulu futhi esheshayo.
Ithebula le-izimali zeDividenti enenzuzo kakhulu futhi esheshayo - ibukisa ngokubuka kwethu phezulu kwe-crypto enenzuzo kakhulu.
Etafuleni le-crypto ekhula ngokushesha uzobona igama lwemali ye-crypto kanye noshintsho kwizilinganiso zalo ngamaphesenti.
Uma uchofoza enye yama-cryptocurrensets anenzuzo kakhulu etafuleni, uzoqondiswa kabusha ekhasini ukuze uthole imininingwane eningiliziwe ngesilinganiso sokushintshwa kwale mali.
Ishadi lemali ebiza kakhulu futhi esheshayo ekhula kakhulu.
Ishadi lama-izimali zeDividenti anenzuzo kakhulu futhi ashesha kakhulu elinye ithuluzi lamahhala eliku-inthanethi elibonisa amazinga aphezulu ama-izimali zeDividenti anenzuzo kakhulu.
Ishadi lama-izimali zeDividenti akhula ngokushesha akhombisa ukuguquguquka kwesilinganiso sama-cryptos aphezulu ayi-10 ngokubuyiselwa okuphezulu kakhulu ngokusho kokulinganisa kwethu.